Satọde, Ọgọstụ 28, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Mgbe inwere ohere, were otu nke Odida: Isi ihe na-aga nke ọma site na enyi Robby Sla Sla. Robby etinyela ezigbo ndu na-emezughị ihe ịga nke ọma ka ị nwee ike ịmụta ma too site na ịda gị. Apụghị m ime akwụkwọ ikpe ziri ezi - e nwere ịrịba akụkọ sitere na ụfọdụ ndị kasị ukwuu isi na ụlọ ọrụ.
Agbanyeghị, ọ ga-amasị m ịkọrọ ụfọdụ n'ime odida ruturu site na akwukwo iji kpalie gi:
Ihe omuma a na enweta site na odida bu ihe nnochi iji mezuo oganihu ndi ozo. N’okwu ndị kachasị mfe, ọdịda bụ onye nkuzi kasịnụ. David Garvin
Agbagharala m ihe karịrị 9,000 gbaa m ọrụ. Efuola m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu 300. Ugboro iri abụọ na isii, atụkwasịrị m obi na m ga-emeri egwuregwu ahụ. Emehiela m ugboro ugboro na ndụ m. Ọ bụ ya mere m ji nwee ihe ịga nke ọma. Michael Jordan
Ọdịda ahụ na-egosi mkpa ọ dị iji ohere. Cliche ahụ dị mma: Ọ bụrụ na itinyeghị ihe egwu, enweghị ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị na-etinye ihe egwu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa ya, ị ga-ada ada n'oge ụfọdụ. Jeff Wuorio
Adababeghị m ugboro 10,000. Enweela m ụzọ 10,000 nke na-agaghị arụ ọrụ. Thomas Edison
O nweghi onye na-enweghị ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ na nchọpụta nke mmejọ ya onwe ya kwesịrị ka akpọ ya onye mmụta. Onyedi Nwa
Ọdịda bụ naanị ohere ịmalite ọzọ, oge a karịa nghọta. Henry Ford
Ọkachamara bụ onye mejọrọ ihe niile enwere ike ime n’ọhịa dị warara. Neils Bohr
Anyị nwere ike ịme ọganiihu dị egwu na teknụzụ site na ọtụtụ ọdịda. Takeo Fukui
Ndị nwere ihe ịga nke ọma na-abụkarị ndị kwere ka ha daa. Chris Brogan na Julien Smith
Iwu # 1: ị ga-amụta ịda, iji merie. David Sandler
Nke a bụ vidiyo dị egwu sitere na Honda nwere otu aha ahụ, na-atụle ọdịda Honda n'ime afọ niile.
Nye otu akwụkwọ Odida: Isi ihe na-aga nke ọma ma hụ na ị ga-achọpụta akwụkwọ akụkọ Robby na-aga n'ihu na blọọgụ yaodida.
Tags: okpuịga nke ọmanzuzo maka ihe ịga nke ọma
Otu esi ejikọta nọmba ekwentị na mkpado arịlịka
Ekwenyere m na ọ bụ eziokwu ọ bụghị naanị na ndị isi ụlọ ọrụ, mana ndị isi n'ozuzu ha. Ndị isi na-ada.
Dịka ọmụmaatụ, ọ kwụsịrị ọrụ ya, malite biz nke ya ma daa. E meriri ya, na ntinye aka, maka onye isi oche nke ụlọ, na Senate steeti. E meriri ya na nhọpụta maka Congress, Senate na Vice President. O meriri oche nzuko omeiwu mgbe ahu achoghi ya ozo! Ọ nwere nkụja nke ụjọ wee bụrụ onye a jụrụ ya dị ka onye ọrụ ala na steeti. Ọzọkwa, e meriri ya na ịgba ọsọ Senate. Ọ daghị mbà. Ọ bụ Abraham Lincoln.
Sep 6, 2010 na 11: 50 AM
N'ụzọ ụfọdụ Google Alerts emeghị ka m mara nke a ngwa ngwa, mana daalụ Doug!